LKML: Nhau dzakanaka, Linux 5.3 rc-4 iri kunze | Linux Vakapindwa muropa
LKML: Nhau dzakanaka, Linux 5.3 rc-4 yabuda
Isaac | | vatyairi, Kernel, Noticias
Linus Torvalds, senguva dzose, yakaburitsa pachena muLKML kuti nyowani Linux 5.3 RC4 yave kuwanikwa. Ndiyo mukwikwidzi wechina kuve wekupedzisira vhezheni yeLinux 5.3. Torvalds akatozivisa kuti iye Anosunungura Anokwikwidza rc3 anga ari mashoma zvisingaite, chimwe chinhu chinotarisirwa asi chisingawanzo kuwanikwa. Zvino, neiyo rc4 yadzokera kune saizi yakakura, saka yawana zvishoma uye tichaona kuti vhezheni yekupedzisira inotaridzika sei.
Chikamu chemhosva, sekutaura kwaLinus, inorara nenetiweki. Iyo network stack yakagadziridzwa nemadhiraivha matsva uye kugadzirisa, chimwe chinhu icho mu rc3 chisina kuitika uye ndosaka chaive chidiki. Asi izvo hazvisi izvo zvese izvo kuwedzera uku kwehukuru kwakagadzira, kwavewo nekumwe shanduko dzakabatsira mukukura kwekernel source code.
Chinhu chisingazivikanwe ndechekuti kwete chete kuti rc3 yaive diki pane zvakajairwa, asi rc4 yanga yakakura kudarika zvakajairwa, zvirinani maererano nenhamba yezvibvumirano zvayange iine. Muchokwadi, zvave zviripo chikuru mumakore maviri apfuura. Saka rc3 uye rc4 vanga vari vasina kujairika. Nekudaro, Linus akataura kuti haana hanya neizvi, sezvo izvi zvisizvo ingori nyaya yemukana.
Zvakanaka, pakati pekuvandudzwa uye shanduko dzinosanganisirwa neLinux 5.3 rc4 ndeaya andakataura nezve netiweki, asi pakave nekuchinjawo mumadhiraivho anorira, GPU, HID, USB, MISC, pamwe ne zvimwe zvinogadzirisirwa kodhi zvinoenderana nezvivakwa senge x86, ARM64, s390, nezvimwe. Pamusoro pezvo, kwave nekuve nekuvandudzwa kwemamwe maturusi, zvinyorwa, uye gadziriso yemafaira maseru seGFS2 neNFS. Iye zvino isu tinongofanirwa kumirira kuvandudzwa kweLinux 5.3 kupedzisa, zvisinei, iwe unotoziva kuti iwe unogona kurodha pasi uye kuyedza iyi yazvino rc4 kubva kernel.org.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LKML: Nhau dzakanaka, Linux 5.3 rc-4 yabuda
Xfce 4.14 iri pano, hezvinoi zvitsva
Iyo nyowani Firefox icon ikozvino yave kuwanikwa ... kana iwe ukashandisa iyo Nightly vhezheni